Ogaden News Agency (ONA) – Gantaal Kuwa Ridada Dheer Ah oo Sacuudiga Lagu Weeraray.
Gantaal Kuwa Ridada Dheer Ah oo Sacuudiga Lagu Weeraray.
Posted by ONA Admin	/ December 20, 2017
Wasaarada Difaaca ee Boqortooyada Sucudiiga ayaa sheegtay in ay ka hortagtay gantaal ay malleeshiyaadka Xuutiyiinta dalka Yemen shalay oo Talaado ahayd ku tuureen magaalada Riyadh ee caasimada wadanka Sucuudiga.
TV-ga laga leeyahay dalka Sucuudiga ee al-Arabiya, ayaa ku waramay in saraakiil ka tirsan Wasaaradda Difaaca u xaqiijiyeen in laga hortagay gantaalkan. Telefishan kuhadla afka xuutiga, ayaa sheegay in ay Sucuudiga ku rideen gantaal ay ugu magac dareen Burkan-2.
Muuqaalo ay baraha bulshada ku faafiyeen goob-joogayaal ku sugan Riyadh ayaa tusinaya qaac madow oo cirka isku shareeray, hase yeeshee wali lama soo sheegin wax khasaare ah. Isbaheysiga carbeed ee uu hogaamiyo Sucuudiga ayaa dagaal culus kula jira dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta dalka Yemen. Sucuudiga ayaa ku eedeeya Iran in ay hubeyso kooxda Xuutiyiinta dalka Yemen.